အရေးတျောပုံ မအောငျ မမွငျမခငျြး ကမြတို့အိမျကနေ ကြှေးမှေးမယျ ဆိုတဲ့ ထားဝယျမွို့ကအလှူ ရှငျမိသားစု - Pyone Pyone Lay
အရေးတျောပုံ မအောငျ မမွငျမခငျြး ကမြတို့အိမျကနေ ကြှေးမှေးမယျ ဆိုတဲ့ ထားဝယျမွို့ကအလှူ ရှငျမိသားစု
By : Thet Thet
တနင်ျသာရီတိုငျး လေးမွို့နယျ ပူးပေါငျးပွီး ထား ဝယျမှာ ဆန်ဒပွ နကွေတဲ့ သူတှကေို စဈအာဏာ ရှငျစနဈ ပွုတျကတြဲ့ အထိ ထမငျး ဟငျး အလှူပွုလုပျ သှားမယျလို့ အလှူရှငျ မိသားစုက ပွော
ပါတယျ။ ဒီလှူဒါနျး ကြှေးမှေး တာကို မွို့တှငျး ရ ပျကှကျက နအေိမျ တခုမှာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီ ၁၇ ရကျနကေ့ စတငျခဲ့တာ ဖွဈပွီး မနကျ ၈ နာရီကနေ ည ၈ နာရီအထိ ထမငျးဟငျး အပါအဝငျ
ထားဝယျ မုနျ့လကျသုပျ၊ ငပိရညျကြို မုနျ့ဖတျ၊ ထ မငျးကွျော၊ ခေါကျဆှဲကွျော စတာတှကေို နစေ့ဉျ ကြှေးနတောလို့ အလှူရှငျ ဦးနဝေငျး မိသားစုက ပွော ပါတယျ။ “အာဏာရှငျ စနဈ လုံးဝမလိုခငျြ
တာကွောငျ့ အရေးတျောပုံ မအောငျ မမွငျမခငျြး ကမြတို့ အိမျကနေ ကြှေးမှေး မယျ။ နယျ ကနေ ဆန်ဒပွတဲ့ သူတှေ စားရေး သောကျရေး အဆငျမ ပွတော ကွားလို့ အခုလို့ လှူဒါနျးဖို့ စီစဉျတာ။ အရေးတျောပုံကွီး အောငျမွငျတဲ့အထိ ကြှေးမှေးပါ့မယျလို့ ကတိပွုပါတယျ” လို့ ပွောပါ တယျ။ အခုလို ကြှေးမှေးနိုငျဖို့ သူတို့မိသားစု အပွငျ သူ ငယျခငျြးတှေ အပါအဝငျ အလှူငှေ ဝိုငျးဝနျးထညျ့
ဝငျကွတယျလို့ အလှူရှငျ အမြိုးသမီးက ပွောပါတယျ။ တနင်ျသာရီ တိုငျးမှာ စဈအာဏာရှငျ အလို မရှိကွောငျး ဆန်ဒပွပှဲ တှကေို ထားဝယျ၊
သရကျခြောငျး၊ လောငျးလုံးနဲ့ ရဖွေူ ၄ မွို့နယျ ပူးပေါငျးပွီး ထားဝယျမွို့မှာ နစေ့ဉျအငျအား သိနျးခြီ ဆငျနှဲနကွေတာပါ။
အရေးတော်ပုံ မအောင် မမြင်မချင်း ကျမတို့အိမ်ကနေ ကျွေးမွေးမယ် ဆိုတဲ့ ထားဝယ်မြို့ကအလှူ ရှင်မိသားစု
တနင်္သာရီတိုင်း လေးမြို့နယ် ပူးပေါင်းပြီး ထား ဝယ်မှာ ဆန္ဒပြ နေကြတဲ့ သူတွေကို စစ်အာဏာ ရှင်စနစ် ပြုတ်ကျတဲ့ အထိ ထမင်း ဟင်း အလှူပြုလုပ် သွားမယ်လို အလှူရှင် မိသားစုက ပြော
ပါတယ်။ ဒီလှူဒါန်း ကျွေးမွေး တာကို မြို့တွင်း ရ ပ်ကွက်က နေအိမ် တခုမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေက စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး မနက် ၈ နာရီကနေ ည ၈ နာရီအထိ ထမင်းဟင်း အပါအဝင်
ထားဝယ် မုန့်လက်သုပ်၊ ငပိရည်ကျို မုန့်ဖတ်၊ ထ မင်းကြော်၊ ခေါက်ဆွဲကြော် စတာတွေကို နေ့စဉ် ကျွေးနေတာလို အလှူရှင် ဦးနေဝင်း မိသားစုက ပြော ပါတယ်။ “အာဏာရှင် စနစ် လုံးဝမလိုတာကြောင့် အရေးတော်ပုံ မအောင် မမြင်မချင်း ကျမတို အိမ်ကနေ ကျွေးမွေး မယ်။ နယ် ကနေ ဆန္ဒပြတဲ့ သူတွေ စားရေး သောက်ရေး အဆင်မ ပြေတာ ကြားလို အခုလို လှူဒါန်းဖို စီစဉ်တာ။
အရေးတော်ပုံကြီး အောင်မြင်တဲ့အထိ ကျွေးမွေးပါ့မယ်လို ကတိပြုပါတယ်” ပာပါ တယ်။ အခုလို ကျွေးမွေးနိုင်ဖို့ သူတို့မိသားစု အပြင် သူ ငယ်ချင်းတွေ အပါအဝင် အလှူငွေ ဝိုင်းဝန်းထည့်
ဝင်ကြတယ်လို အလှူရှင် အမျိုးသမီးက ပြောပါတယ်။ တနင်္သာရီ တိုင်းမှာ စစ်အာဏာရှင် အလို မရှိကြောင်း ဆန္ဒပြပွဲ တွေကို
ထားဝယ်၊ သရက်ချောင်း၊ လောင်းလုံးနဲ ရေဖြူ ၄ မြို့နယ် ပူးပေါင်းပြီး ထားဝယ်မြို့မှာ နေ့စဉ်အင်အား သိန်းချီ ဆင်နွှဲနေကြတာပါ။
သင်လက်ရှိ FACEBOOK အသုံးပြုနေတဲ့ တည်နေရာကို ခြေရာခံလို့မရအောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ? ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
သင်လက်ရှိ FACEBOOK အသုံးပြုနေတဲ့ တည်နေရာကို ခြေရာခံလို့မရအောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ? ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် သင်လက်ရှိ Facebook အသုံးပြုနေတဲ့ တည်နေရာကို ခြေရာခံလို့မရအောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ? ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ဒီနေ့မှာတော့ လူတိုင်းအတွက် လိုအပ်မယ်ထင် တဲ့အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုကို မျှဝေပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သင်လက်ရှိ Facebook အသုံးပြုနေတဲ့ တည်နေရာကို ခြေရာခံလို့မရအောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ? ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို မျှဝေပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ For Android >> Setting >> Apps >> Manage Apps >> Facebook >> App Permission >> Location …
ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့ ခင်ပွန်းရဲ့အကြောင်း ကိုပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့ ခင်ပွန်းရဲ့အကြောင်း ကိုပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံ ထားရတာကြောင် ရှေ့ထွက်မရပေမယ့်လည်း နောက်ကွယ်ကနေ သူလုပ်နိုင်တာလေးတွေကို ကြိုးစားလုပ်ပေးနေရှာတဲ့ ခင်ပွန်းရဲ့အကြောင်း ကိုပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုသရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ဒါရိုက် တာဏကြီးနဲ့ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပြီး၊ နှစ်ကိုယ်တူဘဝလေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဇနီးမောင်နှံက အရမ်းလိုက်ဖက်ပြီး ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီတဲ့စုံတွဲလေး ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကပါ အားကျနေရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလိုအချိန်မှာလည်း ဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ နှစ်ယောက်လုံးက လူထုလှုပ် ရှားမှုတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်သလို ကိုယ့်နိုင်ငံ အတွက် တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပေးနေကြ တာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းကတည်းက …
ချစ်သူဖြစ်သူ သေနတ်ဒဏ်ရာကြောင့် ကွယ်လွန်သွားပေမယ့် နှလုံးသားပေါ်မှာ ချစ်သူမျက်နှာလေး ရေးထိုးခဲ့တဲ့ ညီငယ်လေး
ချစ်သူဖြစ်သူ သေနတ်ဒဏ်ရာကြောင့် ကွယ်လွန်သွားပေမယ့် နှလုံးသားပေါ်မှာ ချစ်သူမျက်နှာလေး ရေးထိုးခဲ့တဲ့ ညီငယ်လေး နေပြည်တော်က ဆန္ဒပြပွဲမှာ သေနတ် ဒဏ်ရာနဲ့ ကွန်လွန်သွားတဲ့ ညီမငယ်လေး မြသွဲ့သွဲ့ခိုင်နဲ့ ကိုးတန်းနှစ်ကတည်းက ငါးနှစ်ကျော်တွဲ လာတဲ့ ညီငယ်လေး ဟိန်းရာဇာ ဖော်ပြလိုက်တဲ့ နှသုံးသားပေါ်က ချစ်သူမျက် နှာနေပြည်တော်က ဆန္ဒပြပွဲမှာ သေနတ်ဒဏ် ရာနဲ့ ကွန်လွန်သွားတဲ့ ညီမငယ်လေး မြသွဲ့သွဲ့ခိုင်နဲ့ ကိုးတန်းနှစ် ကတည်းက ငါးနှစ်ကျော်တွဲလာတဲ့ ညီငယ်လေး ဟိန်းရာဇာ ဖော်ပြလိုက်တဲ့ နှသုံးသားပေါ်က ချစ်သူမျက်နှာကိုးတန်းနှစ်ကတည်းက မြသွဲသွဲ့ခိုင်နဲ့ငါးနှစ်ကျော်တွဲလာတဲ့ ညီလေး ဟိန်းရာဇာရေ။ မင်း သစ္စာတရားဟာ ဒီ၂၁ရာစုမှာ ရှာရခက်သွားပြီကွ။ ငါ ရှက် လိုက်တာ။ ၂၁ရက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၁ရက်နေ့ …
ရုပ်ပုံ တွေကပြောပြမယ့် သင်တို့စုံတွဲ ရဲ့အချစ်ရေး
အရေးပေါ် ပေါင်းတင်နည်းအကြောင်း ဝေမျှပေးမယ်ရှင့်
မကြာခဏလက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူး သူတိုင်း ဒီပို့လေးကို ကျော်မသွားပါနဲ့အရေးကြီးလို့ပါ
ထူထဲရှည်လျားတဲ့ မျက်တောင်မွှေးလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်လိုလျှင်